သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ
Hauming Import & Export CO., LTD. အပြည့်အဝပေါင်းစည်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပို့ကုန်ဖြစ်ပြီး, ပေးသွင်း စတော့အိတ်အပူငွေလွှဲပြောင်းမှုများ, စက်ရုံအတွက် Vietnam. ကျနော်တို့ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်များမှာ Vietnam-ကျယ်ပြန်အကွာအဝေးတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာကြောင်းအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာမြင့်မားတဲ့အဆင့်အတန်းမီထုတ်ကုန်များ-on အချိန်ပေးအပ်ခြင်းကိုသင်တို့အားပေးအာမခံထားသောအလွန်ပါရမီရှင်ပညာအခွက်တဆယ်ရေကန်ရှိသည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုမော်ဒယ်များအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
HAUMING ဖြစ် တစ်ဦး ဦးဆောင် ကုမ္ပဏီ ထို ့သော ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ အပူ လွှဲပြောင်းပေးချေမှုများ အတွက် အဝတ်တန်ဆာ။ သာမန် မျက်နှာပြင်-ပုံနှိပ် အပူ လွှဲပြောင်း တံဆိပ်ကပ်, က အများအားဖြင့် အသုံးအများဆုံး တွင် အရွယ် တံဆိပ်များ သို့မဟုတ် လိုဂိုများ။ နိုင် ဖြစ် ဖြတ် သို့ အပိုင်းပိုင်း, သို့မဟုတ် ထား အပေါ် လိပ်။ လွှဲပြောင်း ကပ်တံဆိပ် အပေါ် လိပ် နိုင် ဖြစ် အသုံးအများဆုံး တွင် အော်တိုမက်တစ် အပူ-သတင်းစာ စက်, တိုးမြှင့် ထို ထိရောက်မှု ၏ အပူကိုနှိပ်။
ကျွန်တော်တို့၏ ထုတ်ကုန် & ဝန်ဆောင်မှု ပါဝင်သည်:
1. ဒါဟာ ရှိပါတယ် ကောင်းသော ခုခံခြင်း သို့ ရေချိုး နှင့် နိုင် ဖြစ် ကိုဆေးကြော 30 ကြိမ် တွင် 60 ဒီဂရီ။
2. logo: ထေမိ ပုံနှိပ်ခြင်း / မျက်နှာပြင် ပုံနှိပ်ခြင်း / အပူ လွှဲပြောင်း ပုံနှိပ်ခြင်း။
3. Size ကို / color: ၏အဆိုအရ သို့ client များ '' လိုအပ်ချက်များကို။
အာမခံ ထို အကောင်းဆုံး အရည်အသွေး, လျင်မြန်စွာ ပေးအပ်ခြင်း, ကျိုးကြောင်းဆီလျော် စျေးနှုန်း။ ကြိုဆိုပါတယ် သင့် အလည်အပတ် နှင့် စုံစမ်းရေး။ ကျေးဇူးတင်ပါသည် သင်သည်!
HAUMING ဖြစ် တစ်ဦး ဦးဆောင် ကုမ္ပဏီ ထို ့သော ရောင်ပြန် အပူ လွှဲပြောင်းပေးချေမှုများ အတွက် အဝတ်တန်ဆာ။ reflective တံဆိပ်များ များမှာ အများအားဖြင့် အသုံးအများဆုံး အပေါ် အားကစား အဝတ်တန်ဆာ, က တိုး ထို ဘေးကင်းလုံခြုံမှု ၏ လေ့ကျင့်ခန်း တွင် ညဥ့်အခါ။ ကြည်လင်သော ရောင်ပြန် တံဆိပ်များ များမှာ အကွောငျး 100~150 candela, ငွေကို ရောင်ပြန် တံဆိပ်များ များမှာ အကွောငျး 300~400 candela ။
1.The ရောင်ပြန် လွှဲပြောင်း flaunts ထင်ရှားတဲ့ စကားများ သို့မဟုတ် လိုဂို။
2.Its အလင်း-အစာရှောင်ခြင်း လက္ခဏာ ကတိတော်များ ကြာရှည်ခံမှု။
3.The ကပ်တံဆိပ် အတွက် စိတ်ကြိုက် ဒီဇိုင်းများ နှင့် အရွယ် များမှာ ကြိုဆိုပါတယ်။
မည်သည့် နောက်ထပ် မေးခွန်းများ, ကြိုဆို သို့ ကျွန်တော်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်: http://www.hauming.com.tw/
HAUMING ဖြစ် တစ်ဦး ဦးဆောင် ကုမ္ပဏီ ထို ့သော CMYK (အပြာရောင်, အနီ, အဝါရောင် ) အနက်ရောင် အပူ လွှဲပြောင်းပေးချေမှုများ အတွက် အဝတ်တန်ဆာ။ ဒါဟာင် သင့်လျော်သော အတွက် ရောင်စုံ ဒီဇိုင်းများ, နှင့် ဒီဇိုင်းများ နှင့် ဓာတ်ပုံ အကျိုးသက်ရောက်မှု။ စိတ်ကြိုက် ဂရပ်ဖစ် နှင့် စာသား နိုင် ဖြစ် ပြုပါပြီ။ ဤ အပူ လွှဲပြောင်း ဝါကြွားတတ်၏ တစ်ခု ဆွဲဆောင်မှု ကြည့်ရှု, အထူးသဖြင့် အတွက် အလှဆင် သို့ အသုံးပြု အပေါ် သားသမီးရဲ့ အဝတ်တန်ဆာ။ မည်သည့် နောက်ထပ် မေးခွန်းများ, ကြိုဆို သို့ ကျွန်တော်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်: http://www.hauming.com.tw/
HAUMING ဖြစ် တစ်ဦး ဦးဆောင် ကုမ္ပဏီ ထို ့သော သိုးစုများ အပူ လွှဲပြောင်းပေးချေမှုများ အတွက် အဝတ်တန်ဆာ။ ဒါဟာ အများအားဖြင့် အသုံးအများဆုံး တွင် အားကစား အဝတ်တန်ဆာ, ကလေး နှင့် အမျိုးသမီးများရဲ့ အဝတ်ကိုဝတ်ဆင်။ အဆိုပါ အထူ ၏ ထို သိုးစုများ နိုင် ဖြစ် 0.6mm, 0.8mm, 1mm ။
ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ သိုးစုကို လွှဲပြောင်းခြင်း, ထို villus ၏ သိုးစုများ များမှာ ပျော့ပျောင်း နှင့် ရှိ သုံးဖက်မြင် အကျိုး အမြင်အာရုံ။ အဆိုပါ ထုံးစံဓလေ့ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ သိုးစုကို လွှဲပြောင်းပေးချေမှုများ နိုင် ဖြစ် အသုံးအများဆုံး အတွက် အလင်း သို့မဟုတ် မှောင်မိုက် သို့မဟုတ် မည်သည့် အစက်အပြောက် t-ရှပ်အင်္ကျီ။ ဒါဟာ ရှိပါတယ် ကောင်းသော ခုခံခြင်း သို့ ရေချိုး နှင့် Non-ကွဲအက်။ မည်သည့် နောက်ထပ် မေးခွန်းများ, ကြိုဆို သို့ ကျွန်တော်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်: http://www.hauming.com.tw/ သို့မဟုတ် အဆက်အသွယ် ကျွန်တော်တို့ကို။
သတ္တု အပူ လွှဲပြောင်း ကပ်တံဆိပ် ရှိပါတယ် များသော အရောင်အဆင်း နှင့် ပုံစံများ, ကျွန်တော်တို့ နိုင် ပေး ထို အရောင် ကဒ် အကယ်. ခင်ဗျား များမှာ စိတ်ဝင်စား။ HAUMING ဖြစ် တစ်ဦး ဦးဆောင် ကုမ္ပဏီ ထို ့သော သတ္တုပါး အပူ လွှဲပြောင်းပေးချေမှုများ။
1.The သတ္တုပါး စက္ကူ လွှဲပြောင်း flaunts ထင်ရှားတဲ့ စကားများ သို့မဟုတ် လိုဂို, ၎င်း၏ အလင်း-အစာရှောင်ခြင်း လက္ခဏာ ကတိတော်များ ကြာရှည်ခံမှု။
2.The sleekly ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ သတ္တုပါး စက္ကူ လွှဲပြောင်း ဖြစ် စုံလင်သော အတွက် အကောက်ခွန်ဦး အမျိုးသားများအတွက် သို့မဟုတ် အမျိုးသမီးတွေအတွက် '' အဝတ်ကိုဝတ်ဆင်။
3.Customized ဒီဇိုင်းများ များမှာ ကြိုဆိုပါတယ်။
ကျေးဇူးပြု ကုန်အံ့ ကျွန်တော်တို့ကို သိ သင့် အထည်, လိမ့်မည် အကြံပြု ထို ကောင်းသော တစ် အတွက် သင်။
မည်သည့် နောက်ထပ် မေးခွန်းများ, ကြိုဆို သို့ ကျွန်တော်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်: http://www.hauming.com.tw/ သို့မဟုတ် အဆက်အသွယ် ကျွန်တော်တို့ကို။
ကျွန်တော်တို့၏ PET ရုပ်ရှင် ရှိ နှစ် မျိုး ၏ ပူသော နှင့် အအေး သက်တူရွယ်တူ, ထို ပုံစံ ၏ အေးချမ်းသော သက်တူရွယ်တူ ဖြစ် PET-510 နှင့် PET-1128AK ။ ဒါဟာင် သင့်လျော်သော အတွက် water-based နှင့် အဆီပြန် မင်။ ဤ PET ရုပ်ရှင် နိုင် လည်း ဖြစ် အသုံးအများဆုံး သို့ ပုံနှိပ် CMYK ပုံနှိပ်ခြင်း နှင့် အော်တိုမက်တစ် မျက်နှာပြင်-ပုံနှိပ်ခြင်း စက်တွေ။ ကျွန်တော်တို့၏ ကုမ္ပဏီ မှ အမိန့် (customized), ကိုးကား, ထုတ်, အလုပ်ရုံ ထုတ်လုပ်မှု, သင်္ဘောပို့ဆောင်မှု, ဝယ်သူ တုံ့ပြန်ချက်များကို။ Hauming ကုမ္ပဏီ နိုင် အသုံးပြု ဤ အကြီးဆုံးအွန်လိုင်း websites များကို သို့ ထိန်းချုပ်မှု ထို ပေးသွင်း စလွယ်ကိုဆွဲ ဖြစ်စဉ်ကို, နှင့် ပေးသွင်း စိတ်ကြိုက် ဝန်ဆောင်မှု, ထို ချက်ချင်းရပ် တုံ့ပြန်မှု အားဖြင့် အကြီးဆုံးအွန်လိုင်း ဝယ်သူ ဝန်ဆောင်မှု အားဖြင့် Skype ကို Facebook က နှင့် နောက်ထပ် လူမှုရေး Network ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ အခြေစိုက်စခန်း ပစ္စည်း အတွက် မျက်နှာပြင်-ပုံနှိပ်ခြင်း, အထူ ဖြစ် 75μ သို့မဟုတ် 100μ, နှင့် solvent- based ပုံနှိပ်ခြင်း မင်, ဟိုမှာ များမှာ နှစ် မျိုး ၏ ပူသော နှင့် အအေး သက်တူရွယ်တူ။ အဆိုပါ ပုံစံ ၏ ပူသော သက်တူရွယ်တူ ဖြစ် PET-330 ။ ဒါဟာင် သင့်လျော်သော အတွက် water-based နှင့် အဆီပြန် မင်။ ဤ PET ရုပ်ရှင် နိုင် လည်း ဖြစ် အသုံးအများဆုံး သို့ ပုံနှိပ် CMYK ပုံနှိပ်ခြင်း, နှင့် အပေါ် အော်တိုမက်တစ် မျက်နှာပြင်-ပုံနှိပ်ခြင်း စက်, ထို အရောင်အဆင်း လိမ့်မည် ဖြစ် အလွန် ပြောင်လက်တောက်ပသော နှင့် ပြည့်လျှံ။
ဒါဟာ နိုင် ဖြစ် အသုံးအများဆုံး အားဖြင့် ပုံနှိပ်ခြင်း ပူပြင်း-အရည်ပျော် ကော် အပေါ် ထို ပြန်. နှင့် ဆန္ဒရှိ ဒီဇိုင်းပုံစံ။ အထူ ဖြစ် 16μ, 50μ ဖြစ် ပုံမှန် စံ။ ဤ ဖြစ် အများအားဖြင့် အသုံးအများဆုံး တွင် မျက်နှာပြင် ပုံနှိပ်ခြင်း။ 16μ နှင့် 23μ ရ ဖြစ် paste လုပ်ထားတဲ့ အပေါ် PET ရုပ်ရှင် ဒါကြောင့် အဖြစ် သို့ အသုံးအများဆုံး သို့ မျက်နှာပြင် ပုံနှိပ်ခြင်း။ အကယ်. ခင်ဗျား ရှိ မည်သည့် နောက်ထပ် မေးခွန်းများ, ခင်ဗျား နိုင် အဆက်အသွယ် ကျွန်တော်တို့ကို အားဖြင့် အရာရှိ ဝက်ဘ်ဆိုက် သို့မဟုတ် ပန်ကာ ကလပ်, ကျွန်တော်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက် လိပ်စာ ဖြစ် http://www.hauming.com.tw နှင့် ပန်ကာ ကလပ် လိပ်စာ ဖြစ် https://www.facebook.com/hauming.hm ။
အပူလွှဲပြောင်း PET ရုပ်ရှင်ပွဲတော်
1. သင့်တင့် viscosity ။
2. ဒါဟာင် လုံလောက်သော ကြည်လင်သော သို့ နေရာချထား။
3. မြင့်သော အပူအအေး ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
4. ဒါဟာ လိမ့်မည် မဟုတ် ထွက်သွား ကော် အပေါ် ထို ထည်။
5. ပူသော အခွံ။
6. ဒါဟာင် သင့်လျော်သော အတွက် rinestone စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည် လွှဲပြောင်းခြင်း, ကုန်အမှတ်တံဆိပ် တံဆိပ်ကပ်, အားကစား ရှပ်အင်္ကျီ, တခုတည်းသော အရောင်။ လိုဂို။
HTS-FL-6 နိုင် ဖြစ် အသုံးအများဆုံး အားဖြင့် ပုံနှိပ်ခြင်း ပူပြင်း-အရည်ပျော် ကော် အပေါ် ထို ပြန်. နှင့် ဆန္ဒရှိ ဒီဇိုင်းပုံစံ။ အထူ ဖြစ် 0.6mm.The flocking လွှဲပြောင်းပေးချေမှုများ လက္ခဏာ ခမ်းနားကြီးကျယ်လှသော ဒီဇိုင်းများ တွင် ထင်ရှားသော အရောင်အဆင်း။ သူတို့ အလုပ် ကြီးမားသော အပေါ် အားလုံး အရောင်အဆင်း နှင့် များမှာ စုံလင်သော အတွက် အသုံးပြု အပေါ် အားကစား နှင့် leisurewear ။ customize သင့် ပုံ အဝတ်ကို နှင့် ဤ flocking လွှဲပြောင်းပေးချေမှုများ။
သိုးဆိတ်များကို Sheet များ
HTS-FL-8 နိုင် ဖြစ် အသုံးအများဆုံး အားဖြင့် ပုံနှိပ်ခြင်း ပူပြင်း-အရည်ပျော် ကော် အပေါ် ထို ပြန်. နှင့် ဆန္ဒရှိ ဒီဇိုင်းပုံစံ။ အထူ ဖြစ် 0.8mm ။
1.Silk နှင့် ဝါ အဖုံးများ အတွက် အမျိုးမျိုးသော ရည်ရွယ်ချက်များ,
2.Assorted ထုတ် ရရှိနိုင်သော,
3.Suitable အတွက် များသော အချိန်အခါ,
5.Sheet အရွယ် အပေါ်တွင် တောင်းဆိုချက်ကို။
HTS-FL-10 နိုင် ဖြစ် အသုံးအများဆုံး အားဖြင့် ပုံနှိပ်ခြင်း ပူပြင်း-အရည်ပျော် ကော် အပေါ် ထို ပြန်. နှင့် ဆန္ဒရှိ ဒီဇိုင်းပုံစံ။ အထူ ဖြစ် 1.0mm ။
1. နမူနာ အကြံပြုပါရစေ,
2. non-အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေ နှင့် aseptic,
3. အမြဲ အသုံးပြု ပြန်လည်အသုံးပြု ပစ္စည်းများ, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဖော်ရွေမှု,
4. ယှဉ်ပြိုင်မှု စျေးနှုန်း, ကောင်းသော အရည်အသွေး, အကောင်းဆုံး ပေးအပ်ခြင်း အချိန်,
1. non-အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေ, အဘယ်သူမျှမ ပိုင်ထိုက်သော အနံ့
3. OEM အမိန့် များမှာ ကြိုဆို
4. insulator တွင်လည်း။
Flocking စာရွက် ဖြစ် ကျယ်ပြန့် အသုံးအများဆုံး တွင် မျိုး ၏ ဝါဂွမ်း, ရောနှော ချည်မျှင်နှင့်အထည်။ ဒါဟာ နိုင် ဖြစ် ကိုအလွယ်တကူ Transfer အပေါ် ထို အထည်, နှင့် သတ္တုပါး အကျိုးသက်ရောက်မှု။ နှင့် သိုးစုကို အကျိုးသက်ရောက်မှု, Eco-friendly နှင့် washable ။
Acrylic ဗဓေလသစ် ဖြစ် ထို အခြေစိုက်စခန်း ကိုယ်ခန္ဓာ ၏ HM-1000 ။ Acrylic ဗဓေလသစ် ဖြစ် ဖန်ဆင်းတော် မှ acrylic နှင့် meth acrylic အက်ဆစ်များ နှင့် သူတို့၏ esters, အဖြစ် ကောင်းစွာ အဖြစ် အခြား။ တွင် ထို့အပြင် သို့ အလွန်ကောင်းမွန်သော ဆန့်ကျင်သူတော်ကောင်းတရား ၏ HM-1000, က ရှိပါတယ် နောက်ထပ် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ အရာ ထည့်သွင်း အလင်း ခုခံခြင်း နှင့် ဆန့်ကျင်အိုမင်း ဝိသေသလက္ခဏာများ, က လည်း ရှိပါတယ် ကောင်းသော အရောင် retention ကို , ရေ ခုခံခြင်း နှင့် ဓါတုဗေဒ ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဒါဟာ အဓိကအားဖြင့် အသုံးအများဆုံး တွင် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ ထည် နှင့် အားကစား အဝတ်တန်ဆာ။
ဤ ပူသော အရည်ပျော် ကော် ဖြစ် အထူး အသုံးအများဆုံး တွင် ထပ်. အုပ်ပေးထားသည် အထည်, က ရှိပါတယ် ပိုကောင်း ရေချိုး ကြာရှည်ခံမှု အပေါ် ဤ ပုံစံ ၏ ထည်။ ဒါဟာ ဖြစ် အသုံးအများဆုံး တွင် သတ္တုပါး အပူ လွှဲပြောင်း ကပ်တံဆိပ် အရာ ဖြစ် သို့လွှဲပြောင်း ပေါ်ကို အဝတ်တန်ဆာ။ ဒါဟာ ရှိပါတယ် ကောင်းသော ခုခံခြင်း သို့ ရေချိုး တွင် 60 ဒီဂရီ နှင့် နိုင် ဖြစ် ကိုဆေးကြော 30 ကြိမ်။ ကျွန်တော်တို့၏ ကုမ္ပဏီ မှ အမိန့် (customized), ကိုးကား, ထုတ်, အလုပ်ရုံ ထုတ်လုပ်မှု, သင်္ဘောပို့ဆောင်မှု, ဝယ်သူ တုံ့ပြန်ချက်များကို။ Hauming ကုမ္ပဏီ နိုင် အသုံးပြု ဤ အကြီးဆုံးအွန်လိုင်း websites များကို သို့ ထိန်းချုပ်မှု ထို ပေးသွင်း စလွယ်ကိုဆွဲ ဖြစ်စဉ်ကို, နှင့် ပေးသွင်း စိတ်ကြိုက် ဝန်ဆောင်မှု, ထို ချက်ချင်းရပ် တုံ့ပြန်မှု အားဖြင့် အကြီးဆုံးအွန်လိုင်း ဝယ်သူ ဝန်ဆောင်မှု အားဖြင့် Skype ကို Facebook က နှင့် နောက်ထပ် လူမှုရေး Network ဖြစ်ပါတယ်။
Fixer ဖြည့်စွက် သို့ ပုံနှိပ်ခြင်း မင် နိုင် တိုးမြှင့်လာသည် ထို elasticity ၏ ထို မင်, ကိုကာကွယ်ပေးနိုင် ထို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ ကပ်တံဆိပ် မှ ကွဲအက်။ ဒါဟာ လည်း ကိုခိုင်ခံ့စေ ထို နှောင်ကြိုး အကြား ထို မတူညီသော ပုံနှိပ်ခြင်း အလွှာ။ YF-001 ဖြစ် အဓိကအားဖြင့် အသုံးအများဆုံး တွင် ကိုထုတ်လုပ် မျက်နှာပြင်-ပုံနှိပ် လွှဲပြောင်း ကပ်တံဆိပ် အကယ်. ခင်ဗျား ရှိ မည်သည့် နောက်ထပ် မေးခွန်းများ, ခင်ဗျား နိုင် အဆက်အသွယ် ကျွန်တော်တို့ကို အားဖြင့် ဖုန်းကို သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုက်, ကျွန်တော်တို့၏ ဖုန်းကို ဂဏန်း ဖြစ် 886-2-26818851, သို့မဟုတ် ဆက် ကျွန်တော်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် (http://www.hauming.com.tw) ။
YF-002 Fixer နိုင် တိုးမြှင့်လာသည် ထို elasticity ၏ ထို မင် နှင့် တားဆီး ထို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ ကပ်တံဆိပ် မှ ကွဲအက်။ reflective လွှဲပြောင်း ကပ်တံဆိပ် အရာ ထပ်ဖြည့် YF-002 နိုင် ဖြစ် ကိုဆေးကြော 30 ကြိမ် တွင် 60 ဒီဂရီ။ YF-002 လည်း ကိုခိုင်ခံ့စေ ထို နှောင်ကြိုး အကြား ထို မတူညီသော ပုံနှိပ်ခြင်း layers.it ဖြစ် အဓိကအားဖြင့် အသုံးအများဆုံး တွင် ကိုထုတ်လုပ် ရောင်ပြန် လွှဲပြောင်း ကပ်တံဆိပ် နှင့် လည်း နိုင် ဖြစ် တစ်ဦး thickener သို့ ကိုခိုင်ခံ့စေ ထို နှောင်ကြိုး
ဤ ပူသော အရည်ပျော် ကော် အနိုင်နိုင် အနံ့, က မ မဟုတ် နံစော် ဘယ်တော့လဲ ပုံနှိပ်ခြင်း, ချမှတ် က တစ်ဦး အများကြီး နောက်ထပ် အသုံးဝင်သော။ ဒါဟာ ဖြစ် အသုံးအများဆုံး တွင် ပုံနှိပ်ခြင်း အပူ လွှဲပြောင်း ကပ်တံဆိပ် အရာ ဖြစ် သို့လွှဲပြောင်း ပေါ်ကို အဝတ်တန်ဆာ။ ကျွန်တော်တို့ အောင် များသော ကျော်ကြား အားကစား တံဆိပ်များ, အတွက် ဥပမာ, adidas, Tek, Fila, jako နယူး ဟန်ချက်, Nike က, UV100 နှင့် လည်း ကော်ပိုရိတ် နှင့် များသော အဝတ်တန်ဆာကို ထုတ်လုပ်သူ။ အကယ်. ခင်ဗျား ရှိ မည်သည့် ပြဿနာ, ခင်ဗျား နိုင် အဆက်အသွယ် ကျွန်တော်တို့ကို, ကျွန်တော်တို့၏ ဖုန်းကို ဂဏန်း ဖြစ် 886-2-26818851, သို့မဟုတ် အလည်အပတ် ကျွန်တော်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် (http://www.hauming.com.tw) ။
ရေကို အခြေခံ. စည်းလုံးညီညွှတ်
YG-65W ဖြစ် ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ဖော်ရွေမှု , Non-အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေ နှင့် Non-ဟာညစ်ညမ်း ဝိသေသလက္ခဏာများ ၏ ပူသော အရည်ပျော် ပုံစံ ကော် Bond ခွန်အား, က ရှိပါတယ် မြင့်သော အပူအအေး ခုခံတော်လှန်ရေး, ကောင်းသော ခုခံခြင်း သို့ အဝါရောင်။ ဒါဟာင် သင့်လျော်သော အတွက်
စိမ့် နှင့် Non-အပူ-sensitive ပစ္စည်း ကပ်လျက်တည်ရှိ နှင့် ရှိပါတယ် များသော ကောင်းသော function ကို, အပါအဝင် ရေ ခုခံတော်လှန်ရေး, ရာသီဥတုက ခုခံခြင်း နှင့် pliability ။
Acrylic ဗဓေလသစ် ဖြစ် ထို အခြေစိုက်စခန်း ကိုယ်ခန္ဓာ ၏ YS-0624S-3C ။ Acrylic ဗဓေလသစ် ဖြစ် ဖန်ဆင်းတော် မှ acrylic နှင့် meth acrylic အက်ဆစ်များ နှင့် သူတို့၏ esters, အဖြစ် ကောင်းစွာ အဖြစ် အခြား။ တွင် ထို့အပြင် သို့ အလွန်ကောင်းမွန်သော ဆန့်ကျင်သူတော်ကောင်းတရား ၏ YS-0624S-3C, က ရှိပါတယ် နောက်ထပ် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ အရာ ထည့်သွင်း ပွင့်လင်း, အလင်း ခုခံခြင်း နှင့် ဆန့်ကျင်အိုမင်း ဝိသေသလက္ခဏာများ, က လည်း ရှိပါတယ် ကောင်းသော အရောင် retention ကို , ရေ ခုခံခြင်း နှင့် ဓါတုဗေဒ resistance.3
Waterborne polyurethane ဗဓေလသစ် ဖြစ် ထို အခြေခံပညာ ကုန်ကြမ်း ပစ္စည်း ၏ YT-0508.YT-0508 ဖြစ် water-based မင် အတွက် ထို အထည် လွှဲပြောင်း နှင့် မြင့်သော elasticity, High-washable ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ရှိပါတယ် ကောင်းသော ကော် အကြား ထို အထက် အထပ် ၏ မင် နှင့် ထို အနိမ့် အထပ် ၏ ပူသော အရည်ပျော် ကော် နှင့် ဖြစ် အများအားဖြင့့်uitable အတွက် ထို အထည် လွှဲပြောင်း သို့ တိုးမြှင့်လာသည် ထို elasticity နှင့် အထူ ၏ ထို ထုတ်ကုန်။
ရေကို အခြေခံ. မှင်
မှ PU အဖြူ ဖြစ် ထို အခြေစိုက်စခန်း အထပ် အတွက် ပုံနှိပ်ခြင်း အပူ လွှဲပြောင်း တံဆိပ်ကပ်, က ပြုမူသောအမှု အဖြစ် ထို နောက်ခံအရောင် ၏ ထို အရောင်, တိုးမြှင့် ထို အရောင် saturation ။ ဒါဟာ နိုင် တားဆီး ထို ထည် မှ ဖေါ်ပြခြင်းဖြင့် ကန် အရောင် အကယ်. ထို ထည် အရောင် ဖြစ် လွန်း မှောင်မိုက် နှင့် ရှိ ကောင်းသော မြင့်သော အပူအအေး သို့မဟုတ် ဖိအားများ ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ ကုမ္ပဏီ မှ အမိန့် (customized), ကိုးကား, ထုတ်, အလုပ်ရုံ ထုတ်လုပ်မှု, သင်္ဘောပို့ဆောင်မှု, ဝယ်သူ တုံ့ပြန်ချက်များကို။ Hauming ကုမ္ပဏီ နိုင် အသုံးပြု ဤ အကြီးဆုံးအွန်လိုင်း websites များကို သို့ ထိန်းချုပ်မှု ထို ပေးသွင်း စလွယ်ကိုဆွဲ ဖြစ်စဉ်ကို, နှင့် ပေးသွင်း စိတ်ကြိုက် ဝန်ဆောင်မှု, ထို ချက်ချင်းရပ် တုံ့ပြန်မှု အားဖြင့် အကြီးဆုံးအွန်လိုင်း ဝယ်သူ ဝန်ဆောင်မှု အားဖြင့် Skype ကို Facebook က နှင့် နောက်ထပ် လူမှုရေး Network ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ ပစ္စည်း ၏ သက်တံ ရောင်ပြန် ရုပ်ရှင် ဖြစ် ပွင့်လင်း, ဒါကြောင့် အားဖြင့် ပုံနှိပ်ခြင်း မတူညီသော အရောင်အဆင်း, မတူညီသော ရောင်ပြန် အရောင်အဆင်း လိမ့်မည် ဖြစ် ပေးအပ်သည်။ အဆိုပါ ပိုပြီးနက်နက်လုပ် ပုံနှိပ်ခြင်း အရောင်အဆင်း ဖြစ်ကြ၏ ထို နောက်ထပ် သရုပ် ထို အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ၏ ရောင်ပြန်ဟပ်မှု လိမ့်မည် ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါဟာ အများအားဖြင့် အသုံးအများဆုံး တွင် အပန်းဖြေ ကျီ နှင့် ရှူးဖိနပ်။ အကယ်. ခင်ဗျား ရှိ မည်သည့် ပြဿနာ, ခင်ဗျား နိုင် အဆက်အသွယ် ကျွန်တော်တို့ကို, ကျွန်တော်တို့၏ ဖုန်းကို ဂဏန်း ဖြစ် 886-2-26818851, သို့မဟုတ်အလည်အပတ်ခရီး ကျွန်ုပ်တို့၏ website (http://www.hauming.com.tw) ။
အဆိုပါ ရောင်ပြန် ပစ္စည်း ဖြစ် ပွင့်လင်း, ဒါကြောင့် အားဖြင့် ပုံနှိပ်ခြင်း မတူညီသော အရောင်အဆင်း, မတူညီသော ရောင်ပြန် အရောင်အဆင်း လိမ့်မည် ဖြစ် ပေးအပ်သည်။ ဤ ပစ္စည်း ဖြစ် 100~150 candela ။
1. အဆိုပါ မျက်နှာပြင် ၏ SU0002B ဖြစ် တောက်ပတဲ့ ထက် SU0001B ။
2. ဒါဟာ ရှိပါတယ် ကောင်းသော ခုခံခြင်း သို့ ရေချိုး နှင့် နိုင် ဖြစ် ကိုဆေးကြော 30 ကြိမ် တွင် 60 ဒီဂရီ။
ပြီးနောက် electroplating, ထို ရောင်ပြန် ပစ္စည်း ဖြစ်လာ ငွေကို အရောင်, ထိုကွောငျ့ က မတတ်နိုင် ဖြစ် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ သို့ အခြား အရောင်အဆင်း, ဒါပေမဲ့ ထို ရောင်ပြန် အကျိုး ဖြစ် ကြီးမြတ်။ ဤ ရောင်ပြန် ရုပ်ရှင် ပြီးပြီ ရှိပါတယ် ပြန်. ကော်, ဒါကြောင့် က နိုင် ဖြစ် သို့လွှဲပြောင်း ပေါ်ကို ထည် ပြီးနောက် ဖြတ် သို့ ဆန္ဒရှိ ပုံစံမျိုးစုံ။ ဤ ပစ္စည်း ဖြစ် 300~400 candela ။
အဆိုပါ ရေစိမ်ခံသော ချုပ်ရိုး တံဆိပ်ခတ်ခြင်း တိပ် နှင့် မြင့်သော အရည်အသွေးပြည့်မီနိုင် တားဆီး ပေါက်ကြား, ကန် မြင့်မား ကော် နှင့် လွယ်ကူသော သို့ ကိုအသုံးပြုပါ။ ဒါဟာ နိုင် တုတ် အပေါ် ထို ချုပ်ရိုး ၏ ထို ပစ္စည်း အတွက် ရေစိမ်ခံသော နှင့် ခုခံခြင်း သို့ လေတိုက် ဝန်, ဒါကြောင့် က သင့်လျော်သည် အတွက် raincoat ရေစိုခံ ဂျာကင်အင်္ကျီ နှင့် အားလုံး မျိုး ၏ အားကစားရုံ leotards ။
ဤ အခုအခံ ဖြစ် နေရာချ အောက် ထို ထည် ဘယ်တော့လဲ အပူကိုနှိပ်, က ဖြည့် ထို ကွာဟချက် အကြား ထို စက်ယန္တရား နှင့် ထို အထည်, ချမှတ် ထို ဖိအားများ နောက်ထပ် အာရုံစူးစိုက်မှု, ရလဒ် တွင် ပိုမိုမြင့်မား အပူကိုနှိပ် အရည်အသွေးပြည့်မီ။ အကယ်. ခင်ဗျား ရှိ မည်သည့် နောက်ထပ် မေးခွန်းများ, ခင်ဗျား နိုင် အဆက်အသွယ် ကျွန်တော်တို့ကို အားဖြင့် ဖုန်းကို သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုက်, ကျွန်တော်တို့၏ ဖုန်းကို ဂဏန်း ဖြစ် 886-2-26818851, သို့မဟုတ် ဆက် ကျွန်တော်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် (http://www.hauming.com.tw) ။
အဆိုပါ လွှတ်ပေး စက္ကူ ဖြစ် အပူခံနိုင်ရည်, က ရှိပါတယ် ကောင်းသော Smooth သို့ တားဆီး အပူ လွှဲပြောင်း တံဆိပ်များ မှ အတားအဆီး နှစ်ဦးနှစ်ဖက်, နှင့် က လည်း ဖြစ် ဖြတ် အားဖြင့် ဖောက်သည်များ ''့တောင်းဆိုချက်ကို။ ကျွန်တော်တို့၏ ကုမ္ပဏီ မှ အမိန့် (customized), ကိုးကား, ထုတ်, အလုပ်ရုံ ထုတ်လုပ်မှု, သင်္ဘောပို့ဆောင်မှု, ဝယ်သူ တုံ့ပြန်ချက်များကို။ Hauming ကုမ္ပဏီ နိုင် အသုံးပြု ဤ အကြီးဆုံးအွန်လိုင်း websites များကို သို့ ထိန်းချုပ်မှု ထို ပေးသွင်း စလွယ်ကိုဆွဲ ဖြစ်စဉ်ကို, နှင့် ပေးသွင်း စိတ်ကြိုက် ဝန်ဆောင်မှု, ထို ချက်ချင်းရပ် တုံ့ပြန်မှု အားဖြင့် အကြီးဆုံးအွန်လိုင်း ဝယ်သူ ဝန်ဆောင်မှု အားဖြင့် Skype ကို Facebook က နှင့် နောက်ထပ် လူမှုရေး Network ဖြစ်ပါတယ်။
Teflon ဖြစ် ဝဲ အပေါ် ထို စက်ယန္တရား protecting ထို လွှဲပြောင်း ပလက်ဖောင်း, က နိုင် ဖြစ် သုတ် နှင့် တစ်ဦး အထည် ဘယ်တော့လဲ ပိုလျှံ ကော် သို့မဟုတ် မင် အစွန်းအထင်း ထို ပလက်ဖောင်း။ ဒါဟာ လည်း တိုး ထို elasticity ၏ ထို လွှဲပြောင်း ပလက်ဖောင်း, တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေး ထို အရည်အသွေးပြည့် ၏ အပူကိုနှိပ်။ အကယ်. ခင်ဗျား ရှိ မည်သည့် နောက်ထပ် မေးခွန်းများ, ခင်ဗျား နိုင် အဆက်အသွယ် ကျွန်တော်တို့ကို အားဖြင့် ဖုန်းကို သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုက်, ကျွန်တော်တို့၏ ဖုန်းကို ဂဏန်း ဖြစ် 886-2-26818851, သို့မဟုတ် ဆက် ကျွန်တော်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် (http://www.hauming.com.tw) ။
မှ PU-004wp နိုင် ဖြစ် ဝဲ အပေါ် ထို ပြန်. ၏ လွှဲပြောင်း ကပ်တံဆိပ် မပါဘဲ ပြန်. ကော်, အတွက် နမူနာ သိုးစုကို စာရွက်များ သို့မဟုတ် သတ္တုပါး စာရွက်များ။ အထူ ဖြစ် 40μ. ဒါဟာ ဖြစ် ထို လုနီးပါး ထို စုံလင်သော PE ပစ္စည်း အဖြစ် ထို Bond ရုပ်ရှင်။
1.It နိုင် မထိုက်မတန် အားလုံး မျိုး ၏ ရောင်ပြန် ရုပ်ရှင်, အထည်အလိပ်, သတ္တု, ဖန်ခွက် စသည်တို့ကို, ဖြစ်ခြင်း အလွန်ကောင်းမွန်သော ကော်, ရေ ခုခံခြင်း နှင့် ဆန့်ကျင်ရေနံ။
2.It ပိုင်ဆိုင်သော ထို အားသာချက်များ အပါအဝင် အားကြီးသော ကော် နှင့် နိုင် ဖြစ် ကိုဆေးကြော နောက်ထပ် ထက် 30 ကြိမ် တွင် 60 ဒီဂရီ။
3.Do မဟုတ် ပါဝင် Formaldehyde, Non-အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေ နှင့် ဖြစ် ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ဖော်ရွေမှု ထုတ်လုပ်ပါတယ်။
မှ PU-008wp နိုင် ဖြစ် ဝဲ အပေါ် ထို ပြန်. ၏ လွှဲပြောင်း ကပ်တံဆိပ် မပါဘဲ ပြန်. ကော်, အတွက် နမူနာ သိုးစုကို စာရွက်များ သို့မဟုတ် သတ္တုပါး စာရွက်များ။ အထူ ဖြစ် 80μ.Itရဲ့ လုပ်ငန်းများ၌ အားဖြင့် ထို ပစ္စည်း ၏ PE,
1. ကောင်းသော elasticity, လွယ်ကူသော သို့ အသွင်သဏ္ဌာန်, ဆန့်ကျင်ဘက် ယဉ်ပါး,
2. usage အပူအအေး ဖြစ် 150 စင်တီဂရိတ်,
Applications ကို: ဒါဟာ အသုံးအများဆုံး အတွက် မည်သည့် ထည်။
မှ PU-012wp နိုင် ဖြစ် ဝဲ အပေါ် ထို ပြန်. ၏ လွှဲပြောင်း ကပ်တံဆိပ် မပါဘဲ ပြန်. ကော်, အတွက် နမူနာ သိုးစုကို စာရွက်များ သို့မဟုတ် သတ္တုပါး စာရွက်များ။ အထူ ဖြစ် 120μ. ဒါဟာင် သင့်လျော်သော အတွက် တစ်ဦး အမျိုးမျိုး ၏ ထုတ်ကုန်များ, ကျွန်တော်တို့၏ ထုတ်ကုန် စီးရီး ပါဝင် အမျိုးမျိုးသော အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ ၏ ရေစိမ်ခံသော အစင်း စော်ကားသော ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်, ရေစိမ်ခံသော အမျှင်ဓာတ် စော်ကားသော ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်, ချည်ထိုး-ကပ်လျက်တည်ရှိ Non-ရက် အထည်, ရေမှုန်ရေမွှား-ကပ်လျက်တည်ရှိ Non-ရက် အထည်, အတု Lea ။ အဆိုပါ အလွှာဟာ, အတွင်း နံရံကို, ဓါတုဗေဒ စာရွက်, အမျိုးမျိုးသော Non-ရက် ထပ်. အုပ်ပေးထားသည် နှင့် ပူသော အရည်ပျော် ကော် နှင့် ဒါကြောင့် ပေါ်။ ကျွန်တော်တို့၏ ပူသော အရည်ပျော် ကော် ရုပ်ရှင်တွေ များမှာ ကျယ်ပြန့် အသုံးအများဆုံး တွင် တံဆိပ် တွယ်ကပ်, အထည်အလိပ် ပေါင်းစပ်ထားခြင်း, ရှူးဖိနပ် ချမှတ်ခြင်း, နှင့် ထို တွယ်ကပ် ၏ မချုပ်ရိုး အတွင်းခံ, အဆိုပါ တွယ်ကပ် ၏ ကား အိမ်ခေါင်မိုး, ရထား ကာကွယ်ပေးနိုင် ကြမ်းပြင်, Acoustic ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်, ထိုင်ခုံ အလှဆင် စသည်တို့ကို, အဆိုပါ တွယ်ကပ် ၏ မိုးလုံလေလုံ အလှဆင်, အားကစား ကုန်ပစ္စည်း, sound & အပူ insulator တွင်လည်း သောပစ္စည်းများ နှင့် အီလက်ထရောနစ် ကုန်ပစ္စည်းများ နှင့် ဒါကြောင့် ပေါ်။
A. Thermo ပူသော အရည်ပျော် ကော် ရုပ်ရှင်တွေ
B. ကောင်းသော နှောင်ကြိုး ခွန်အား
C. ကောင်းသော မာကျောမှုကို
ကျွန်တော်တို့၏ ပူသော အရည်ပျော် ကော် ရုပ်ရှင် ဖြစ် ထို Idealist ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့-friendly ကော် ပစ္စည်း။ အဆိုပါ လျှောက်လွှာ အပါအဝင် ပန်း စတစ်ကာ, armbands, ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ကော်။ အထည်အလိပ်, ပိတ်ထည် ပေါင်းစပ်ပါဝင်သော။ စတာတွေ, ခဏခဏ အသုံးအများဆုံး တွင် အဝတ်အစား, အိတ် နှင့် အမှု။ ကုန်သွယ် အမှတ်အသား, ချည်မျှင်နှင့်အထည် & အထည်, အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ နှင့် ကစားစရာအရုပ် စက်မှုလုပ်ငန်း နှင့် ဒါကြောင့် ပေါ်။
HAUMING ဖြစ် တစ်ဦး ဦးဆောင် ကုမ္ပဏီ ထို ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ ရောင်ပြန် ပိုက်။ RP-01c အများအားဖြင့်ဖြစ် အသုံးအများဆုံး တွင် အားကစား အဝတ်တန်ဆာ, ချုပ် အပေါ် ထို အနား ၏ အဝတ်ကိုဝတ်ဆင်။ ကျွန်တော်တို့၏ ကုမ္ပဏီ မှ အမိန့် (customized), ကိုးကား, ထုတ်, အလုပ်ရုံ ထုတ်လုပ်မှု, သင်္ဘောပို့ဆောင်မှု, ဝယ်သူ တုံ့ပြန်ချက်များကို။ Hauming နိုင် အသုံးပြု ဤ အကြီးဆုံးအွန်လိုင်း websites များကို သို့ ထိန်းချုပ်မှု ထို ပေးသွင်း စလွယ်ကိုဆွဲ ဖြစ်စဉ်ကို, နှင့် ပေးသွင်း စိတ်ကြိုက် ဝန်ဆောင်မှု, ထို ချက်ချင်းရပ် တုံ့ပြန်မှု အားဖြင့် အကြီးဆုံးအွန်လိုင်း ဝယ်သူ ဝန်ဆောင်မှု အားဖြင့် Skype ကို Facebook က နှင့် နောက်ထပ် လူမှုရေး Network ဖြစ်ပါတယ်။
HAUMING ဖြစ် တစ်ဦး ဦးဆောင် ကုမ္ပဏီ ထို ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ ရောင်ပြန် ပိုက်။ ဒါဟာ အများအားဖြင့် အသုံးအများဆုံး တွင် အားကစား အဝတ်တန်ဆာ, ချုပ် အပေါ် ထို အနား ၏ အဝတ်ကိုဝတ်ဆင်။ HAUMING ရောင်ပြန် ချုပ် တွင် ပိုက် (အတူ ကြိုး) ဖြစ် တစ်ဦး မြင့်မား ရောင်ပြန် ထုတ်ကုန်။ ဒါဟာ လိမ့်မည် တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် မြင်ကွင်း မှ နေဝင်ရီတရော သို့ အရုဏ်။ ရိုးရိုး ချုပ် က သို့ မည်သည့် ချုပ်ရိုး သို့ ပေါင်း တစ်ဦး ဘေးကင်းလုံခြုံမှု ရောင်ပြန်ဟပ်မှု သို့ မည်သည့် စီမံကိန်းက။ မည်သည့် နောက်ထပ် မေးခွန်းများ, ကြိုဆို သို့ ကျွန်တော်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်: http://www.hauming.com.tw/ သို့မဟုတ် အဆက်အသွယ် ကျွန်တော်တို့ကို။
HAUMING ဖြစ် တစ်ဦး ဦးဆောင် ကုမ္ပဏီ ထို ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ ရောင်ပြန် ပိုက်။ reflective ပိုက် တိပ် (မပါဘဲ ကြိုး) အများအားဖြင့် အသုံးအများဆုံး တွင် အားကစား အဝတ်တန်ဆာ, ချုပ် အပေါ် ထို အနား ၏ အဝတ်ကိုဝတ်ဆင်။
1.Made ၏ ထည်။
2.Suitable အတွက် ဖက်ရှင်တွေ: ဝတ်ဆင်ထား, အိတ်, ရှူးဖိနပ်။
3.High မြင်ကွင်း ရောင်ပြန် ရေပိုက်, အစွန်း။
မည်သည့် နောက်ထပ် မေးခွန်းများ, ကြိုဆို သို့ ကျွန်တော်တို့၏ က် http: //www.hauming.com.tw/ သို့မဟုတ် အဆက်အသွယ် ကျွန်တော်တို့ကို။
HAUMING ဖြစ် တစ်ဦး ဦးဆောင် ကုမ္ပဏီ ထို ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ ရောင်ပြန် ထုတ်ကုန်။
reflective ပစ္စည်း ဖြစ် Single-တဖက်သတ်, Non-elasticity, က အများအားဖြင့် အသုံးအများဆုံး တွင် အားကစား အဝတ်ကို နှင့် စက်ဘီး အဝတ်, ချုပ် အပေါ် ထို အနား ၏ ထို အဝတ်တန်ဆာကို။
Width ကို နိုင် ကွဲပြားခြားနား အကြား 1~120 စင်တီမီတာ။ ကျေးဇူးပြု အဆက်အသွယ် ကျွန်တော်တို့ကို အတွက် နောက်ထပ် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ။
ကျွန်တော်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်: http://www.hauming.com.tw/
လူပျို Side အထည်အလိပ်တိပ်
HAUMING ဖြစ် တစ်ဦး ဦးဆောင် ကုမ္ပဏီ ထို ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ ရောင်ပြန် ထုတ်ကုန်။ reflective ပစ္စည်း ဖြစ် Single-တဖက်သတ် နှင့် ရှိပါတယ် ကြီးမားသော elasticity ။ ဒါဟာင် width ကို အကြား 1~120 စင်တီမီတာ။
1.Complies နှင့် အီးယူ စံ။
2. material: Polyester နှင့် စပ်လျှဉ်း။
3.Reflective elastic တိပ် အတွက် ကျယ်ဝန်းသော သုံးစွဲမှု, နှင့် နိုင် ဆန့် သို့ မီးခြစ် မတူညီသော သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ။
4. Width ကို နိုင် ဖြစ် ချိန်းချက်သော အညီ သို့ ဖောက်သည်ရဲ့ လိုအပ်ချက်များကို။
5. ဒါဟာင် အများအားဖြင့် အသုံးအများဆုံး တွင် အားကစား အဝတ်တန်ဆာ, နှင့် စက်ဘီး အဝတ်, ချုပ် အပေါ် ထို အနား ၏ ထို အဝတ်တန်ဆာကို။
နှစ်ချက် Side အထည်အလိပ်တိပ်
RT ကို-01 ရှိ ရောင်ပြန် သောပစ္စည်းများ အပေါ် နှစ်ဦးစလုံး နှစ်ဖက်, ထို interlayer ဖြစ် အဖြူ ထည် အရာ ရှိပါတယ် ကြီးမားသော elasticity, အများအားဖြင့် အသုံးအများဆုံး အပေါ် အားကစား အဝတ်တန်ဆာ, ချုပ် အပေါ် ထို အနား ၏ ထို အဝတ်တန်ဆာကို။ Width ကို နိုင် ကွဲပြားခြားနား အကြား 1~120 စင်တီမီတာ။ Hauming ရှိပါတယ် မျက်နှာပြင်-ပုံနှိပ် အပူ လွှဲပြောင်း တံဆိပ်ကပ်, ရောင်ပြန် အပူ လွှဲပြောင်း တံဆိပ်ကပ်, CMYK အပူ လွှဲပြောင်း လေဘယ်လ်အမှတ်အသား, 3D အပူ လွှဲပြောင်း တံဆိပ်ကပ်, သတ္တုပါး စာရွက်, သက်တံ ရောင်ပြန် ရုပ်ရှင်, ငွေကို ရောင်ပြန် ရုပ်ရှင် နှင့် ဒါကြောင့် ပေါ်။
RT ကို-03 ရှိ ရောင်ပြန် သောပစ္စည်းများ အပေါ် နှစ်ဦးစလုံး နှစ်ဖက်, ထို interlayer ဖြစ် အနက်ရောင် ထည် အရာ ရှိပါတယ် ကြီးမားသော elasticity, က အများအားဖြင့် အသုံးအများဆုံး တွင် အားကစား အဝတ်တန်ဆာ, နှင့် စက်ဘီး အဝတ်, ချုပ် အပေါ် ထို အနား ၏ ထို အဝတ်တန်ဆာကို။ Width ကို နိုင် ကွဲပြားခြားနား အကြား 1~120 စင်တီမီတာ။ အကယ်. ခင်ဗျား ရှိ မည်သည့် နောက်ထပ် မေးခွန်းများ, ခင်ဗျား နိုင် အဆက်အသွယ် ကျွန်တော်တို့ကို အားဖြင့် ဖုန်းကို သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုက်, ကျွန်တော်တို့၏ ဖုန်းကို ဂဏန်း ဖြစ် 886-2-26818851, သို့မဟုတ် ဆက် ကျွန်တော်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက် (http://www.hauming.com.tw) ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏ချဲ့ထွင်ဒီရေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့တပြင်လုံးကိုန်ထမ်းများပိုမိုထုတ်ကုန်များနှင့်အပြည့်အဝကို ခံရ. န်ဆောင်မှုများကိုကြိုးစားအားထုတ်ကြမည်